Ndị njem nleta na ndị bi ebe ahụ ga -egosi nnwale nnwale vax/adịghị mma iji banye azụmaahịa Oahu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ndị njem nleta na ndị bi ebe ahụ ga -egosi nnwale nnwale vax/adịghị mma iji banye azụmaahịa Oahu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • culinary • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • HITA • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Kamaainas • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Achọrọ akaebe iji banye ụlọ nri, ụlọ mmanya, na ndị ọzọ
Onye isi obodo Honolulu Rick Blangiardi kwupụtara taa, Mọnde, Ọgọst 30, 2021, na malite na Septemba 13, 2021, ndị ahịa niile chọrọ ịbanye n'ụfọdụ ụlọ ọrụ Oahu ga-eweta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ihe akaebe nke ule COVID-19 na-adịghị mma n'ime 48 gara aga. awa.
Iwu mberede ọhụrụ a nke Safe Access bụ nzaghachi maka mmụba na-aga n'ihu nke ikpe COVID-19 ọhụrụ pụtara kemgbe mbata nke ụdị Delta.
Ọnụ ọgụgụ ndị a dị elu na -etinye nnukwu mkpa n'ụlọ ọgwụ na ndị ọrụ Hawaii.
Tinyere ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nsonaazụ ule adịghị mma, ndị ọrụ nke azụmaahịa ndị a ga -egosikwa kaadị vax ha ma ọ bụ nsonaazụ ule.
a iwu mberede ọhụrụ ga -adị irè ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 60. Steeti na okpuru ọchịchị ewepụtakwala akwụkwọ mgbochi maka ndị ọrụ. Ụmụaka nọ n'okpuru afọ iri na abụọ, ndị na -erughị eru maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, gụpụrụ ihe achọrọ.
Ụlọ ọrụ ndị a na -eso n'okpuru iwu ọhụrụ a:
Ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na mmanya (anaghị ewepụta nri) - mmanya ga -akwụsị inye ya elekere iri
Gyms na akụrụngwa mgbatị ahụ, gụnyere ụlọ ihe nkiri ịgba egwu
Ebe a na -egwu bọọlụ, arcades, na ụlọ biliadi
Thelọ ihe nkiri sịnịma
Akụkụ ime ụlọ nke ubi ahịhịa
Aquariums, ebe nkiri ndụ mmiri
Ịkwọ ụgbọ mmiri nke azụmahịa
Ọdọ mmiri azụmahịa ọha na nkeonwe
Usoro ịgba agba/ịgba ụta
Ebe nkiri azụmahịa ndị ọzọ dị ka go kart, obere golf
Ụlọ ọrụ ọ bụla na -enye nri na/ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ maka oriri n'ụlọ
Ihe ngosi anabatara nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke pụtara igosipụta na ị dejupụtala usoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa nke Ngalaba Ahụike Hawaii kwadoro na nrube isi na mmemme niile nke Njem Nchedo Steeti site na ịnye:
oyiri nke kaadị ịgba ọgwụ mgbochi nke steeti kwadoro;
otu foto/nnomi dijitalụ nke kaadị ịgba ọgwụ mgbochi steeti kwadoro; ma ọ bụ
ngwa dijitalụ/amamịghe steeti Hawaii kwadoro nke na-akwado ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke (gụnyere site na mmemme/ngwa Njem Nchekwa).
Ị ga -enyerịrị njirimara yana otu ozi ahụ dị ka ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
“Ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke” pụtara izu 2 agafeela mgbe ọgwụ nke abụọ n'ime usoro ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 nke enyere ikike maka iji ihe mberede ma ọ bụ nke Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ nke US kwadoro. N'aka nke ọzọ, ọ ga-abụrịrị na izu abụọ agafeela otu ọgwụ mgbochi COVID-2 nke enyere ikike maka iji ihe mberede ma ọ bụ Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ nke United States kwadoro ya, n'agbanyeghị ma enwetala nkwalite ọgwụ mgbochi COVID-19.
ọ bụrụ na mmadụ jụrụ igosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ihe akaebe nke ule COVID-19 na-adịghị mma na ntọala nwere ike ghara ịbanye ma ewezuga ebumnuche dị oke oke na oke (dịka iji ụlọ ịsa ahụ, ịtụtụ nri, ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ ịgbanwe n'ime ụlọ mkpuchi). Mgbe ị na -abanye ebe a na -ezubere maka ụdị ebumnuche a, ndị mmadụ n'otu n'otu ga -eyi nkpuchi ihu.
Onye isi obodo Honolulu Rick Blangiardi kwuru na a ga -atụ anya na azụmaahịa nke mmemme Safe Access Oahu ga -etinye na iwu ọhụrụ. Ndị na -enweghị ike ihu ntaramahụhụ ma ọ bụ mmechi nwa oge. Ụlọ oriri na ọahuụ Oụ nke Oahu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga -anọgide na -edo onwe ha n'okpuru mmachi ikike ugbu a, ọ dịkwa mkpa maka ndị njem nleta gaa Hawaii.